ရန်ကုန်မြို့မှာ တွေ့ရတဲ့ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံရဲ့ ဆန္ဒပြ မြင်ကွင်း။ (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၂၁)
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းတာကို နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀န်းနဲ့အတူ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြဖို့ တရုတ်၊ ရုရှားနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကို တိုင်းရင်းသား ဆန္ဒပြသူတွေက တောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားနေသူတွေကို မြန်မာအာဏာပိုင်တွေ အင်အားသုံးနှိမ်နင်းတာတွေ မလုပ်အောင် ဖိအားပေးဖို့လည်း ဒီကနေ့ ရန်ကုန်မြို့က ဆန္ဒပြပွဲမှာ တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း သတင်းထောက် ကိုမိုးဇော် ပြောပြပေးမှာပါ။
ရန်ကုန်မြို့ ရောက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု ၂၇ စုပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လူမျိုးပေါင်းစုံအထွေထွေသပိတ်ကော်မတီက ဦးဆောင်ပြီး တရုတ်၊ ရုရှားနဲ့ ထိုင်းသံရုံးတွေကို ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး သူတို့ လိုလားချက်တွေကို တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
“We call on you , your government to join altogether with international community to condemn the Myanmar military coup. To respect the wills of the people of Myanmar and our request for federal democracy, freedom, justice and peace…. ”
ရန်ကုန်မြို့က တရုတ်သံရုံးရှေ့မှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့ လိုလားချက်တွေကို ကရင်လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ နော်အက်စတာချစ်က အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ သူတို့လိုလားတဲ့ အချက်တွေကိုလည်း နော်အက်စတာချစ်က ဗွီအိုအေကို ရှင်းပြပါတယ်။
“တောင်းဆိုတဲ့ဟာ ၇ချက်ရှိတယ်။ ပထမအချက်ကတော့ Myanmar military coup ကျရှုံးဖို့ပေါ့နော်။ အတူတကွ ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ပေးဖို့ပေါ့။ ပြီးသွားရင် မြန်မာပြည်သားတွေ တောင်းဆိုတဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေဖြစ်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ၊ လွတ်လပ်ရေးရယ်၊ တရားမျှတရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လေးစားဖို့ပေါ့နော်။ ပြီးသွားရင် ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့ဟာတွေကို အကြမ်းဖက်တဲ့ဟာတွေကို Pressure ပေးဖို့ပေါ့။ မလုပ်ဖို့ပေါ့။”
ကျန်အချက်တွေကတော့ နိုင်ငံရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေ၊ သတင်းသမားတွေကို ဖမ်းဆီးတာတွေ ရပ်တန့်စေဖို့၊ သတင်းအချက်အလက် စီးဆင်းမှုမှာ အရေးပါတဲ့ Internet ဆက်သွယ်မှုတွေကို ဖြတ်တောက်တာတွေ မလုပ်ဖို့၊ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ စီမံကိန်းတွေ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို ရွှေ့ဆိုင်းဖို့ နဲ့ ပြည်သူ့အာဏာကို ပြည်သူလူထုထံပြန်ပေးဖို့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀န်းနဲ့အတူ ကြိုးပမ်းဖို့ဆိုတဲ့ အချက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့ ဆန္ဒပြပွဲမှာ လူအင်အား ၅,၀၀၀ ကျော်လောက်ပါဝင်တက်ရောက်ပြီး အာဏာရှင် စနစ်ကျဆုံးရေး၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းရေး၊ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ် ပေါ်ပေါက်ရေး၊ မတရားဖမ်းဆီးခံရသူများလွတ်မြောက်ရေးဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံ ၄ ချက်ကို အဓိကထား ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဆန္ဒပြပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ရခိုင်လူငယ်တစ်ဦးကတော့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းဖို့ လိုလားကြောင်း အခုလို ပြောပါတယ်။
“ဒီဟာကြီးရဲ့ အဆုံးသတ်က ၂၀၀ ၈ထဲကို ပြန်ဝင်မှာကိုတော့ ကျမတို့ မလိုလားဘူး။ ၂၀၀၈ က စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ အရင်းခံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ အဲဒါ လုံးဝ ဖျက်သိမ်းသွားဖို့ရာလိုလားတယ်။ ပြီးတော့မှ ဒီ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲကြီးပြီးသွားတယ်။ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြီး ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်တောင်မှ ကျမတို့ကို လူများစုက အနိုင်ကျင့်တဲ့ အာဏာရှင်စနစ်ကို မလိုလားဘူး။ အဲဒီအထိ တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပေါ့နော်။ အဲဒီအထိ ပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။”
ဝ တိုင်းရင်းသား လူငယ်တစ်ယောက်ကလည်း ဆန္ဒပြပွဲမှာ ပါဝင်လာရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို အခုလို ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့လည်း လူငယ်ပဲလေနော်။ ကျနော်တို့လည်း အနာဂတ်ရှိတယ်။ အဲဒီအတွက် ကျနော်တို့က အဆုံးထိ သွားချင်တာပေါ။ အထူးသဖြင့်ကတော့ ကျနော်တို့ဘက်မှာ ဆိုရင် လူမျိုးရေးခွဲခြားတာနဲ့ ပညာရေးဆို အရမ်းထိခိုက်ရတယ်။ ပြီးရင် ကျနော်တို့ ဆီမှာ ကျောင်းတက်ဖို့ဆိုရင် အခက်အခဲတွေ အများကြီးရှိတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းက ဒီ ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေး နည်းနည်းလွတ်လပ်ခွင့် ရတဲ့အခါကျတော့ နည်းနည်းအဆင်ပြေလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ စစ်အစိုးရစနစ်ကို ကျနော်တို့ ပြန်သွားဖို့ကတော့ ကျနော်တို့ လက်မခံနိုင်ဘူးခင်ဗျ။”
ရန်ကုန်မြို့ ရောက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဟာ ဒီမနက် ၈ နာရီခွဲမှာ မြေနီကုန်း ပဒုမ္မာပန်းခြံမှာ စုဝေးပြီး ဆူးလေအထိ ချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့တာပါ။ ချီတက်ရာလမ်းမှာတော့ တရုတ်၊ ရုရှားနဲ့ ထိုင်းသံရုံးကို ရှေ့တွေမှာ သူတို့ တောင်းဆိုချက်တွေကို တင်ပြခဲ့သလို မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ ပြင်သစ်သံရုံးရှေ့ တွေကိုလည်း ဖြတ်သန်းပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့ကလည်း တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု ၁၆ စုပါဝင်ပြီး မြေနီကုန်းကနေ ရွှေဂုံတိုင်တံတားအထိ ချီတက် ခဲ့ကြသလို ၉ ရက်နေ့ကတော့ တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေ စုဝေးပြီး အမေရိကန်သံရုံးရှေ့ မှာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမေရိကန်၊ ဥရောပသမဂ္ဂ စတဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေက ဖိအားပေးတာ၊ အရေးယူတာတွေ လုပ်လာနေချိန်မှာ တရုတ်၊ ရုရှားနဲ့ ဒေသတွင်း နိုင်ငံတချို့ကပါ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေက တောင်းဆိုနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
စဈအာဏာသိမျးမှု ဝိုငျးဝနျးဆနျ့ကငျြဖို့ တရုတျ၊ ရုရှားနဲ့ ထိုငျးတို့ကို တိုငျးရငျးဆန်ဒပွသူတှတေောငျးဆို
စဈတပျက အာဏာသိမျးတာကို နိုငျငံတကာ အသိုငျးအဝနျးနဲ့အတူ ဆနျ့ကငျြကနျ့ကှကျကွဖို့ တရုတျ၊ ရုရှားနဲ့ ထိုငျးနိုငျငံတို့ကို တိုငျးရငျးသား ဆန်ဒပွသူတှကေ တောငျးဆိုလိုကျကွပါတယျ။ ငွိမျးခမျြးစှာ ဆန်ဒပွလှုပျရှားနသေူတှကေို မွနျမာအာဏာပိုငျတှေ အငျအားသုံးနှိမျနငျးတာတှေ မလုပျအောငျ ဖိအားပေးဖို့လညျး ဒီကနေ့ ရနျကုနျမွို့က ဆန်ဒပွပှဲမှာ တောငျးဆိုခဲ့ကွတာပါ။ အပွညျ့အစုံကိုတော့ ဗှီအိုအေ မွနျမာပိုငျး သတငျးထောကျ ကိုမိုးဇျော ပွောပွပေးမှာပါ။
ရနျကုနျမွို့ရောကျ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးစု ၂၇ စုပါဝငျဖှဲ့စညျးထားတဲ့ လူမြိုးပေါငျးစုံအထှထှေသေပိတျကျောမတီက ဦးဆောငျပွီး တရုတျ၊ ရုရှားနဲ့ ထိုငျးသံရုံးတှကေို ခြီတကျဆန်ဒပွခဲ့ကွပွီး သူတို့ လိုလားခကျြတှကေို တောငျးဆိုခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ရနျကုနျမွို့က တရုတျသံရုံးရှမှေ့ာ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးစုတှရေဲ့ လိုလားခကျြတှကေို ကရငျလူငယျတဈဦးဖွဈတဲ့ နျောအကျစတာခဈြက အင်ျဂလိပျဘာသာနဲ့ တောငျးဆိုလိုကျတာပါ။ သူတို့လိုလားတဲ့ အခကျြတှကေိုလညျး နျောအကျစတာခဈြက ဗှီအိုအကေို ရှငျးပွပါတယျ။
“တောငျးဆိုတဲ့ဟာ ၇ခကျြရှိတယျ။ ပထမအခကျြကတော့ Myanmar military coup ကရြှုံးဖို့ပေါ့နျော။ အတူတကှ ဝိုငျးဝနျးလုပျပေးဖို့ပေါ့။ ပွီးသှားရငျ မွနျမာပွညျသားတှေ တောငျးဆိုတဲ့ တောငျးဆိုခကျြတှဖွေဈတဲ့ ဖကျဒရယျဒီမိုကရစေီ၊ လှတျလပျရေးရယျ၊ တရားမြှတရေး၊ ငွိမျးခမျြးရေးကို လေးစားဖို့ပေါ့နျော။ ပွီးသှားရငျ ငွိမျးခမျြးစှာဆန်ဒပွတဲ့ဟာတှကေို အကွမျးဖကျတဲ့ဟာတှကေို Pressure ပေးဖို့ပေါ့။ မလုပျဖို့ပေါ့။”
ကနျြအခကျြတှကေတော့ နိုငျငံရေးနဲ့ လူ့အခှငျ့အရေးလှုပျရှားသူတှေ၊ သတငျးသမားတှကေို ဖမျးဆီးတာတှေ ရပျတနျ့စဖေို့၊ သတငျးအခကျြအလကျ စီးဆငျးမှုမှာ အရေးပါတဲ့ Internet ဆကျသှယျမှုတှကေို ဖွတျတောကျတာတှေ မလုပျဖို့၊ လကျရှိဆောငျရှကျနတေဲ့ စီမံကိနျးတှေ၊ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုတှကေို ရှဆေို့ငျးဖို့ နဲ့ ပွညျသူ့အာဏာကို ပွညျသူလူထုထံပွနျပေးဖို့ နိုငျငံတကာ အသိုငျးအဝနျးနဲ့အတူ ကွိုးပမျးဖို့ဆိုတဲ့ အခကျြတှေ ပါဝငျပါတယျ။
ဒီနေ့ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးစုတှရေဲ့ ဆန်ဒပွပှဲမှာ လူအငျအား ၅,၀၀၀ ကြျောလောကျပါဝငျတကျရောကျပွီး အာဏာရှငျ စနဈကဆြုံးရေး၊ ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒဖေကျြသိမျးရေး၊ ဖကျဒရယျဒီမိုကရစေီစနဈ ပျေါပေါကျရေး၊ မတရားဖမျးဆီးခံရသူမြားလှတျမွောကျရေးဆိုတဲ့ ကွှေးကွျောသံ ၄ ခကျြကို အဓိကထား ကွှေးကွျောခဲ့ကွပါတယျ။
ဆန်ဒပွပှဲမှာ ပါဝငျခဲ့တဲ့ ရခိုငျလူငယျတဈဦးကတော့ ၂၀၀၈ ခုနှဈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒကေို ဖကျြသိမျးဖို့ လိုလားကွောငျး အခုလို ပွောပါတယျ။
“ဒီဟာကွီးရဲ့ အဆုံးသတျက ၂၀၀ ၈ထဲကို ပွနျဝငျမှာကိုတော့ ကမြတို့ မလိုလားဘူး။ ၂၀၀၈ က စဈအာဏာရှငျတှရေဲ့ အရငျးခံဖွဈတယျပေါ့နျော။ အဲဒါ လုံးဝ ဖကျြသိမျးသှားဖို့ရာလိုလားတယျ။ ပွီးတော့မှ ဒီ ဒီမိုကရစေီတိုကျပှဲကွီးပွီးသှားတယျ။ စဈအာဏာသိမျးမှုကွီး ပွီးသှားတယျဆိုရငျတောငျမှ ကမြတို့ကို လူမြားစုက အနိုငျကငျြ့တဲ့ အာဏာရှငျစနဈကို မလိုလားဘူး။ အဲဒီအထိ တိုကျပှဲဝငျသှားမှာပေါ့နျော။ အဲဒီအထိ ပါဝငျသှားမှာဖွဈပါတယျရှငျ့။”
ဝ တိုငျးရငျးသား လူငယျတဈယောကျကလညျး ဆန်ဒပွပှဲမှာ ပါဝငျလာရတဲ့ ရညျရှယျခကျြကို အခုလို ပွောပါတယျ။
“ကနြျောတို့လညျး လူငယျပဲလနေျော။ ကနြျောတို့လညျး အနာဂတျရှိတယျ။ အဲဒီအတှကျ ကနြျောတို့က အဆုံးထိ သှားခငျြတာပေါ။ အထူးသဖွငျ့ကတော့ ကနြျောတို့ဘကျမှာ ဆိုရငျ လူမြိုးရေးခှဲခွားတာနဲ့ ပညာရေးဆို အရမျးထိခိုကျရတယျ။ ပွီးရငျ ကနြျောတို့ ဆီမှာ ကြောငျးတကျဖို့ဆိုရငျ အခကျအခဲတှေ အမြားကွီးရှိတယျ။ အခုနောကျပိုငျးက ဒီ ဒီမိုကရစေီအခှငျ့အရေး နညျးနညျးလှတျလပျခှငျ့ ရတဲ့အခါကတြော့ နညျးနညျးအဆငျပွလောတယျ။ ဒါပမေဲ့ စဈအစိုးရစနဈကို ကနြျောတို့ ပွနျသှားဖို့ကတော့ ကနြျောတို့ လကျမခံနိုငျဘူးခငျဗြ။”
ရနျကုနျမွို့ရောကျ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးတှဟော ဒီမနကျ ၈ နာရီခှဲမှာ မွနေီကုနျး ပဒုမ်မာပနျးခွံမှာ စုဝေးပွီး ဆူးလအေထိ ခြီတကျ ဆန်ဒပွခဲ့တာပါ။ ခြီတကျရာလမျးမှာတော့ တရုတျ၊ ရုရှားနဲ့ ထိုငျးသံရုံးကို ရှတှေ့မှော သူတို့ တောငျးဆိုခကျြတှကေို တငျပွခဲ့သလို မလေးရှား၊ အငျဒိုနီးရှားနဲ့ ပွငျသဈသံရုံးရှတှေ့ကေိုလညျး ဖွတျသနျးပွီး ဆန်ဒပွခဲ့ကွတာပါ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ဖဖေျောဝါရီလ ၁၁ ရကျနကေ့လညျး တိုငျးရငျးသား လူမြိုးစု ၁၆ စုပါဝငျပွီး မွနေီကုနျးကနေ ရှဂေုံတိုငျတံတားအထိ ခြီတကျ ခဲ့ကွသလို ၉ ရကျနကေ့တော့ တိုငျးရငျးသားလူငယျတှေ စုဝေးပွီး အမရေိကနျသံရုံးရှမှေ့ာ ဆန်ဒပွခဲ့ကွပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံက အခွအေနနေဲ့ ပတျသကျလို့ အမရေိကနျ၊ ဥရောပသမဂ်ဂ စတဲ့ အနောကျနိုငျငံတှကေ ဖိအားပေးတာ၊ အရေးယူတာတှေ လုပျလာနခြေိနျမှာ တရုတျ၊ ရုရှားနဲ့ ဒသေတှငျး နိုငျငံတခြို့ကပါ ပူးပေါငျးပါဝငျကွဖို့ တိုငျးရငျးသားတှနေဲ့ ဆန်ဒပွသူတှကေ တောငျးဆိုနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။